Tanora zanak’i Dada Ankazondandy : Nampiseho ny heriny – MyDago.com aime Madagascar
Tanora zanak’i Dada Ankazondandy : Nampiseho ny heriny
Vory lanona tao amin’ny kianja filalaovam-baolina tao Ankazodandy ny Alakamisy 09 May 2013 teo ny vahoaka mpomba ny movansy Ravalomanana. Hetsika izay nokarakarain’ny tanora Zanak’i dada distrikan’i Manjakandriana. Tonga tany an-toerana nanatrika ny hetsika ny filoha mpitarika ny antoko zanak’i dada ny Cst Rakotoarivony Jean Pierre, ny Cst Rahantamalala Lydia, ny Ct Manoela Ralaimampisainarinony ary ireo mpitolona sasantsasany avy aty an-drenivohitra. Nifanandrify tamin’ny tsenan’Ankazodandy ny hetsika ka maro ny olona no tonga nanatrika ny hetsika. Ireo nandray fitenenana rehetra dia samy nanao fanentanana ny amin’ny tokony hisoratana anarana ao anatin’ny lisim-pifidianana ary nampafantatra fa Lalao Ravalomanana no kandidà atolotry ny movansy Ravalomanana. Ny mpitondra tenin’i zanak’i dada avy amin’iny faritra Manjakandriana iny dia nanambara fa na dia teo aza ny sakana isan-karazany dia manana kandidà isika dia Ramatoa Lalao Ravalomanana. Ny solontenan’ny tantsaha Andriamatoa Alfred dia nilaza fa nisolo tena anareo tantsaha amin’ny tolona tany Antananarivo ny tenako hoy izy.Ny filoha mpitarika ny tanora zanak’i dada Andriamatoa Fety dia nanambara fa efa nahazo alalàna ny fanaovana ny hetsika tany an-toerana. Latsaka an-katerana hoy izy ny firenena noho ny nataon-dRajoelina. Tsy nisy zavabita teto nandritra ny efataona nahateo azy ireo fa ny fanondranana andramena, ny harem-pirenena no nisy. Ny Ct Manoela dia nilaza fa aza matahotra ianareo vahoaka hoe vidina vola fa alaivo ny vola fa adala tompo.Efa akaiky ny fifidianana hoy izy ka tokony hieritreritra tsara isika fa io no hanaovantsika azy. Io fifidianana io hoy Manoela no hanehoantsika fa tsy misy zavatra vita teto. Isika hoy izy tsy zanatany intsony fa misy amin’ireo kandidà ireo no mizaka zom-pirenena frantsay ka aza voafitaka amin’izany. I Neny hoy izy no kandidàntsika fa I Dada no mitady any amin’ny mpamatsy voa. Aza kivy fa isika reraka hoy Manoela no tanjon-dRajoelina. Ataony izay hampahantra antsika. Aza amidy ny safidy fa tsinjovy ny taranaka.
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 mai 2013 Catégories Politique
1 pensée sur “Tanora zanak’i Dada Ankazondandy : Nampiseho ny heriny”
15 mai 2013 à 11 h 45 min
Tokony efa manomana toy izao ny isaky ny distrika de mitety tsena mihibtsy mba manentana ny eny ifotony fa indrindra ho anireo vahoaka tsy mahay taratasy, hita fa mahomby izao fa tsy miandry ny avy aty centrale foana, homba antsika anie ny Tompo
Précédent Article précédent : Lalao Ravalomanana teny Ampangabe androany
Suivant Article suivant : Flash Info: La SADC demande à Mme Ravalomnana, à M. Ratsiraka et à M. Rajoelina de se retirer pour éviter les troubles